China omenala ụmụ nwanyị tri-ngwakọta 50% polyester 25% owu 25% rayon racerback rụrụ kwesịrị ekwesị tank n'elu na logo na nnukwu factory na-emepụta | Ọhụụ
omenala ụmụ nwanyị ngwakọta ngwakọta 50% polyester 25% owu 25% rayon racerback rụrụ kwesịrị ekwesị tank n'elu na logo na nnukwu
Women'smụ nwanyị ndị a Tri-Blend Racerback tank na-akụzi ụdị omume niile dị mma: ngwakọta atọ, ọkpụkpọ azụ, na okwu otuto na-atọ ụtọ. Ultra-fechaa, nke a ejiji na-atụ tank bụ nhọrọ zuru oke maka ihe omume ọzọ nke otu gị.
1.Themụ nwanyị ndị a Tri-Blend Racerback tank na-akụ na ọnọdụ niile ziri ezi: ngwakọta atọ, ọkpụkpọ azụ, na okwu otuto na-atọ ụtọ. Ultra-fechaa, nke a ejiji na-atụ tank bụ nhọrọ zuru oke maka ihe omume ọzọ nke otu gị.
Ihe ndị a bụ tankị na-agba ọsọ ọsọ bụ ezigbo nkasi obi na-enweghị isi. Ihe dị gịrịgịrị ọnụ dabara adaba nke na ịkwesighi iyi cami na ha, mana enwere ike ịwụnye ha ma ọ bụrụ na ọ na-eme ka ahụ ruo gị ala. N'ihi na uwe elu a niile gbasara gị ịdị mma.
Nke gara aga: arụmọrụ egwuregwu ara
Osote: Oem obibi akwụkwọ larịị saa super soft gburugburu olu ebughibu kwesịrị ekwesị ụmụ nwanyị tri-ngwakọta isi tshirt
Achara T-uwe elu
combed owu tshirt
uwe elu polyester
larịị omenala logo ajị anụ pink dobe ubu cro ...
arụmọrụ egwuregwu ara
N'ogbe breathable polyester marathon omenala ...